Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Efatra sy trano fandraisam-bahiny efatra amin'ny trano fandraisam-bahiny efatra no manakarama amin'ny taona 2021
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Four Seasons Hotels & Resorts dia nitanisa asa manodidina ny 4,000 teo anelanelan'ny volana Janoary 2021 – Jona 2021 (hatramin'ny 14 Jona), izay mihoatra ny navoakany tamin'ny 2020.
Ny orinasa dia manakarama mpiasa marobe sy ambaratonga marobe manerana ny trano fandraisam-bahininy 119 sy trano 44 tsy miankina.
Ny karama Four Seasons dia azo lazaina fa ny fisokafan'ny hotely manerantany, taorian'ny herintaona nisian'ny fameperana ny fitsangatsanganana.
Ilaina mafy ny asa eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra ho an'ny mpahandro sakafo, arahin'ny mpitantana sy ny mpiasa manadio.
Hotely sy Resorts Four Seasons dia nanamboatra mpiasa tamin'ny 2021, miaraka amin'ny paositra vaovao miisa 431 ny volana febroary 2021 ka hatramin'ny 889 tamin'ny martsa 2021. Ny orinasa monina any Canada dia manakarama mpiasa marobe sy ambaratonga ambony manohana ireo trano fandraisam-bahiny 119 sy trano fonenana tsy miankina 44.
Ny orinasa dia nanoratra asa manodidina ny 4,000 teo anelanelan'ny volana Janoary 2021 – Jona 2021 (hatramin'ny 14 Jona), izay mihoatra noho izay navoakany tamin'ny taona 2020. Ny fandraisana asa dia mifantoka any Etazonia sy Kanada, miaraka amin'ny fiakarana 47% sy 25% amin'ny fandefasana asa, tsirairay, hatramin'ny Jona 2021, raha ampitahaina amin'ny Janoary sy Desambra 2020. Ny fandraisana mpiasa any amin'ny firenena Azia-Pasifika (APAC), toa an'i Thailand, Japan, ary Korea atsimo, dia nitombo ihany koa tamin'ny 2021 raha oharina tamin'ny 2020. Ankoatr'izay, ny fandefasana asa dia misongadina ao firenena toa an'i Costa Rica, Seychelles, Anguilla, Brazil, ary Italia.
Seasons FourNy fandraisana karama dia azo lazaina fa ny fisokafan'ny trano fandraisam-bahiny manerantany, aorian'ny herintaona nisian'ny fameperana ny fitsangatsanganana. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manakarama ekipa manokatra mialoha ho an'ny trano fandraisam-bahiny. Nanohy ny famandrihana ny orinasa, nanolotra làlana fitsangatsanganana nanomboka ny volana oktobra 2021 hatramin'ny desambra 2022. Ny fitomboan'ny fandraisana mpiasa any amin'ny firenena voafantina dia mety koa noho ny isan-jaton'ny isan'ny olona mandray vaksiny COVID-19, ankoatry ny fahitana ny tanjon'ny dia.
Mahavariana fa ny Four Seasons dia manoritra fa miova ny tontolon'ny orinasa, milaza fa ny mpiasa vaovao dia tokony hiantoka ny fitantanana ara-bola mahomby. Ohatra, ny asany 'Director of Food & Beverage' dia mitaky fihetsika sy fanitsiana amin'ny fanovana ny tontolon'ny orinasa sy ny fiantohana ny fitantanana ara-bola mahomby.
Ilaina mafy ny asa eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra ho an'ny mpahandro sakafo, arahin'ny mpitantana ny asa sy ny mpiasa manadio. Four Seasons dia manome bonus $ 1,000 amin'ny fanaovan-tsonia toy ny mpizara, mpiasa an-trano, mpiandraikitra ary mpanatrika valet. Ny orinasa dia miasa koa amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano onenan'izy ireo amin'ny fanampiana sy fitarihana orientation ho an'ny tompona trano vaovao sy ny fikirakirana ny olana isan'andro momba ny trano fandraisam-bahiny mba hiasa tsara.
Four Seasons dia nanokatra indray ny hotely maro ary natao hanokatra trano vaovao any Etazonia, Italia, Mexico ary Japon. Afaka nijery mpikarama bebe kokoa ny orinasa amin'ny volana ho avy mba hahafeno ny fepetra takian'ny ekipa mialoha ny fisokafany.